Varimi Vechichena Vochemachema neMutongo weDare rePamusorosoro
Mbudzi 30, 2010
Rimwe remasangano anomirira varimi vemapurazi makuru, reCommercial Farmers’ Union, CFU, rinoti harina kufadzwa nemutongo wakapiwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court neChishanu, iro rakarasa chikumbiro chakanga chaiswa nesangano iri chekuti varimi vechichena vachiri pamapurazi akatorwa nehurumende, vambopiwa nguva yekuti vagare pamapurazi aya.
Sangano iri rakanga richiti kubviswa kuri kuitwa varimi vechichena pamapurazi avo kune rusarura ganda mukati, sezvo varimi vechitema vari pamapurazi zvisiri pamutemo vasiri kubatwabatwa.
Asi mukuru wevatongi vematare, Chief Justice Godfrey Chidyausiku, vakarasa chikumbiro ichi vachiti chakatadza kuratidza nyaya yerusarura ganda, uye sangano reCFU harina kuratidza humbowo hwekuti pane varimi vechitema vari kugara pamapurazi zviri kunze kwemutemo.
Mutungamiri weCFU VaDeon Theron vaudza Studio 7 kuti danho ravangatora chete kudzokera kuSADC Tribunal ne nyaya yavo. Dare reSADC Tribunal muna 2008 rakatonga kuti hurumende yeZimbabwe iripe varimi vechichena vakatorerwa minda, asi hurumende yakaramba kutevedzera mutongo uyu.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanoti maonero avo ndeekuti mutongo uyu wazarura musuwo wekuti vanhu vapinde pamadiro mumapurazi evachena mashoma asara.
Ukuwo, bepanhau repainternet reZimonline rinoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, makurukota emuZanu PF pamwe nevatongi vematare edzimhosva, vakabvuta mahekita mamiriyoni mashanu kubva muna2000.
Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa neZimonline kwemwedzi mitatu.
Mupepeti weZimonline, VaAbel Mutsakani, vanoti mhuri yekwaVaMugabe ine mapurazi gumi nemana, mhuri yekwaMujuru inonzi ine mapurazi makumi maviri nemashanu uye mukuru weseneti, Amai Edna Madzongwe, vane mapurazi matanhatu.
VaMutsakanyi vanoti ongororo yavo haina kuona nhengo dzeMDC dziine mapurazi, kunze kwemunyori mukuru weboka raVaArthur Mutambara, VaWelshman Ncube.
Hurukuro naProfessor John Makumbe
Hurukuro naVaAbel Mutsakanyi